Artificial Intelligence Chip ကုမ္ပဏီ Cambricon သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် အသားတင် ဆုံးရှုံးမှု ၉၅% တိုး လာကြောင်း အစီရင်ခံ - Pandaily
Artificial Intelligence Chip ကုမ္ပဏီ Cambricon သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် အသားတင် ဆုံးရှုံးမှု ၉၅% တိုး လာကြောင်း အစီရင်ခံ
Feb 28, 2022, 20:14ညနေ 2022/02/28 23:24:47 Pandaily
AI Computer Chip နည္းပညာ ကုမၸဏီ Cambricon က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္မွာ၎င်း၏ 2021 စွမ်းဆောင်ရည် အစီရင်ခံစာထို ကာလအတွင်း ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၇ ၂၁ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၄. ၃ သန်း) ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၅၇. ၁၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဘေဂျင်း အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ၏ အစီရင်ခံစာအရ မိခင် ကုမ္ပဏီ၏ အသားတင် အရှုံး မှာယွမ် ၈ ၄၇ သန်း ဖြစ်ပြီး ယမန်နှစ် အလားတူ ကာလက ယွမ် ၄ ၃၅ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ၉၄. ၉၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Cambricon ၏ ၀ င်ငွေ သည်အဓိကအားဖြင့် cloud service နှင့် edge computing product line နှင့် smart computing cluster business တို့ မှရရှိသည်။ အစီရင်ခံစာ ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ အစွန်း ကွန်ပျူတာ ထုတ်ကုန် လို င်း၏ MLU220 ချစ်ပ် များနှင့် အရှိန်မြှင့် ကဒ် များကို ထိပ်တန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များစွာ တွင်အသုံးပြု ခဲ့ပြီး တစ် သန်း နီးပါး ရောင်းချခဲ့သည်။ မဖြစ်စလောက် ကွန်ပျူတာ ထုတ်ကုန် လိုင်း မှ ၀ င်ငွေသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူကာလ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် တိုးတက် မှုများစွာ ရရှိခဲ့သည်။
Cambricon သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ Jiangsu ၊ Kunshan ရှိ အသိဉာဏ်ရှိသော ကွန်ပျူတာ စင်တာ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းအတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ယခင် စီမံကိန်း ၏အခြေခံ စံနှုန်း အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ကြယ် ၏ ဂုဏ် သတင်း အပေါ် မှီခို အားထား ခြင်းနှင့် စပျစ်သီးပြွတ် စီးပွားရေး ၀ င်ငွေ သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။
Cambricon က ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ဆုံးရှုံးမှု တိုး လာခြင်း သည်အဓိကအားဖြင့် R & D ကုန်ကျစရိတ် များ မြင့်တက် ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု စရိတ် များတွင် ရှယ်ယာ ငွေပေးချေ ခြင်းနှင့် ရောင်းအား ကုန်ကျစရိတ် များကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကုမ္ပဏီသည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ကိုဆက်လက် တိုးမြှင့် ခဲ့ပြီး စွမ်းရည် များကို တက်ကြွစွာ စုဆောင်းခဲ့သည်။ ရှယ်ယာ ငွေပေးချေမှု ကုန်ကျစရိတ် နှင့်အတူ R & D ကုန်ကျစရိတ် တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် စမတ် ချစ်ပ် စျေးကွက် ရှာဖွေခြင်းနှင့် ဂေဟစနစ် တည်ဆောက် ခြင်းတို့တွင် ကုမ္ပဏီ၏ တက်ကြွစွာ ကြိုးပမ်း မှုများကြောင့် ရောင်းအား ကုန်ကျစရိတ် များလည်း မြင့်တက်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော လေး နှစ်တာကာလအတွင်း Cambricon မှ ဘဏ္ data ာရေး အချက်အလက်များအရ ၂၀၁၇ ခုနှစ် တွင်စုစုပေါင်း လည်ပတ်မှု ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၇. ၈ ၄၃ သန်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ယွမ် ၁၁၇ သန်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ယွမ် ၄ ၄၄ သန်းနှင့် ၂၀၂၀ တွင် ယွမ် ၄ ၅၉ သန်း ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အသားတင် အရှုံး သည် ၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၀ အထိ ယွမ် ၃ ၈၁ သန်း၊ ယွမ် ၄၁. ၀ ၄၆ သန်း၊ ယွမ် ၁. ၁ ၇၉ ဘီလီယံ နှင့် ယွမ် ၄ ၃၅ သန်း အသီးသီး ရှိခဲ့သည်။
China Business Information Platform Seven Check က Cambricon သည် AI chip ထုတ်ကုန်များ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင် မှုများ ကိုအာရုံစိုက် ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကတည်းက Cambricon သည် terminal ကိရိယာများ၊ အစွန်း ကွန်ပျူတာ နှင့် cloud ၀ န်ဆောင်မှု များပါ ၀ င်သည့် smart chips နှင့် acceleration card များ ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် Cambricon သည် Shanghai Kechuang Ban (Star Market) တွင် စာရင်းဝင် ခဲ့သည်။
Chip ကုမ္ပဏီ Tianyi Hexin သည်ယွမ် သန်းပေါင်း ရာနှင့်ချီ သော Round C ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည်
ချစ်ပ် ကုမ္ပဏီ Nanjing Tianyi Hexin Electronics Co., Ltd. သည် မကြာသေးမီက ယွမ်သန်း ရာနှင့်ချီ သော ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ပြီးဆုံး ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။